घरमा बिरालो प्राप्त गर्न आधारभूत सामानहरू | बेजिया
मारिया vazquez | | Mascotas
बिरालो अपनाउने सोचमा हुनुहुन्छ? के तपाइँसँग कहिले प्रश्नहरू छ के तपाइँ चाहानुहुन्छ र कहिले चाहनुहुन्न तपाइँ घर पुग्दा? यदि तपाईंले यसलाई स्वीकार्ने निर्णय गर्नुभयो भने, यो सम्भावना भन्दा बढी हुन्छ कि संरक्षकले तपाईंलाई तपाईंलाई आवश्यक सबै चीजहरू र तपाईं घर पुग्दा पछ्याईनु पर्ने चरणहरूको बारेमा जानकारी दिनेछ, तर यदि यो त्यस्तो होईन भने हामी तपाईंलाई सहयोग गर्नेछौं!
परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन हुनु अघि हामी बौलाहा हुन्छौं। विशेष गरी यदि तपाईंले आफ्नो जीवन पहिले जनावरहरूसँग साझेदारी गर्नुभएन भने, तपाईं सोच्नुहुनेछ कि यसलाई वास्तवमै अझ आवश्यक चीजहरू चाहिन्छ - मार्केटिंग सामान! यद्यपि त्यहाँ धेरै थोरै छन् बिरालाहरूका लागि आधारभूत सामान तपाईं जाँच गर्न समय हुनेछ रूपमा।
बिराला घर आउँदा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मानसिक शान्ति प्रदान गर्नु हो, एउटा कोठा आरक्षित गर्नु जहाँ यसले शरण लिन सक्दछ जबसम्म यो आत्मविश्वास प्राप्त हुँदैन र यसलाई हाम्रो लागि खोज्ने मानिस हुन दिनुहोस्। यद्यपि तलका सामानहरू पनि आवश्यक छन्।
1 फिडर र पिउने
फिडर र पिउने
मेरा बिरालाहरू घरमा भएको पहिलो चार वर्षमा, मैले सिरेमिक कचौरा प्रयोग गरें जुन वर्षौंको लागि कोठामा राखिएको थियो। यदि तपाईंसँग केहि त्यस्तो छ भने, उत्तम! यदि होईन, तपाईंसँग फिडर किन्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन किनकि यो बिरालो बिरालाहरूको लागि आधारभूत सामानहरू मध्ये एक हो। मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईं एक सिरेमिक एक शर्त; यस सामग्री मा कचौरा महान स्थायित्व प्रदान गर्दछ, सफा गर्न सजिलो छ र पर्याप्त तौल गर्न चाल र हल्लाबाट जोगिनुहोस् जब बिरालोले खान्छ तर तपाईं प्लास्टिक र स्टिलको लागि रबर बेसको साथ जान सक्नुहुनेछ; तिनीहरू हल्का र सस्ता छन्।
बिरालो हुनै पर्छ तपाईंको पानीमा सधैं स्वच्छ पानी, त्यसैले तपाईं पनि एक पेय प्राप्त गर्न को लागी हुनेछ। यो एक फिडर र पिउने को रूपमा प्रयोग गर्न एक डबल फिडर शर्त भन्दा एक अलग एक किन्नु राम्रो छ। यदि तिनीहरू सँगै छन् भने, बिरालोले खाएमा पानी फोहोर हुनेछ। जब यो आकारमा आउँदछ, तपाईंले घरबाट टाढा बिताउन लाग्नु भएको घण्टाको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ। यदि तपाईंसँग शंका वा डर छ कि बिराला पानीबाट बाहिर निस्किन्छ भने, हप्पर पिउने एक उत्तम विकल्प हुन्छ।
जब बिरालाहरू तिनीहरूको बाहिरी पहुँच छैन स्क्र्यापर एक अपरिहार्य तत्व बन्छ। अर्कोतर्फ, कुनै बिरालाले यो हुनु हुँदैन जब सम्म उनीहरूले हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छन् भनेर निश्चित हुँदैन, त्यसैले हो वा हो स्क्र्याचिंग पोष्ट आवश्यक हुनेछ।
एक स्क्र्याचि post पोष्टले बिरालाहरूको लागि कल्याण प्रदान गर्दछ। केवल तिनीहरू यसमा आफ्ना न nailsहरू तीखा गर्न सक्षम हुनेछन्, तिनीहरू पनि सक्षम हुनेछन् यसलाई आराम गर्न वा खेल्न प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईं पनि एक पर्याप्त मा शर्त कि एक विन्डो पछि राखिएको परिवार को नयाँ सदस्य दिन्छ, तपाईं डबल मनोरन्जन हुनेछ।
एक डिजाइनर ओछ्यानमा भाग्य खर्च नगर्नुहोस्! हामी तपाईंलाई यो गर्न निषेध गर्दैनौं, तर हामी तपाईंलाई आश्वासन दिन सक्दैनौं कि तपाईंको बिरालो मनपर्नेछ। घरमा पहिलो केही दिनहरूमा, धेरै फुलफुल कम्बल उनीहरूको लागि ठूलो पलंग हुन सक्छ। वास्तवमा, नरम सतह र न्यानो ठाउँ नै उनीहरूको अनन्त झोलालाई सहज बनाउन आवश्यक छ।
सायद तपाईले सुन्नु भएको छ कि बिरालाहरू कति स्वच्छ छन्। र, दिनको केहि घण्टा आफैंमा सन्तुष्ट पार्ने बाहेक, तिनीहरू जान्दछन् कि उनीहरू जन्मेको क्षणदेखि नै कचराको बक्स कसरी प्रयोग गर्ने। अवस्थित स्यान्डबक्सहरू दुबै खुला र बन्द छ। तपाईले जसलाई पनि छनौट गर्नुहोस्, हामी तपाईलाई सल्लाह दिन्छौं कि माथिल्लो भाग हटाउनुहोस् र कचौरा बक्सलाई विवेकी र शान्त ठाउँमा राख्नुहोस्, जसले गर्दा बिरालो डराउँदैनन्। साथै, तपाईंले यसलाई फीडरको नजिक कहिल्यै राख्नु हुँदैन।
जुत्ता तिनीहरूका लागि बहुमूल्य खेलौना बन्छ र तिनीहरूलाई घर पुग्दा तिनीहरूलाई सामजिक बनाउन मद्दत गर्दछ। अवश्य पनि, तपाई यसलाई धेरै मध्ये एकको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ प्वाँखसहित नर्कहरू र अन्य सामानहरू जुन तपाईं घरपालुवा जनावर पसलहरूमा पाउनुहुनेछ र त्यसले तिनीहरूलाई सामान्यतया पागल बनाउँदछ। अन्य धेरै सफल र सस्तो खेलौना फेरी खेलौना चूहों र स्प्रि .हरू हुन् जुन तिनीहरूलाई तपाईंको कम्पनीसँग खेल्न आवश्यक पर्दैन।
यदि तपाईंले पप्पी अपनाउनुभएको छ भने तपाईंलाई चासो छ ब्रशको लागी बानी लिनुहोस्। मृत कपाल हटाउन मद्दतको अतिरिक्त, यसरी हेयरबलले निम्त्याउने क्षतिलाई कम गर्दछ, ब्रशिंग धेरै बिरालाहरूको लागि रमाइलो र आरामदायक छ। विशेष गरी बगाउने समयमा, तपाईं दुबै र तपाईंको बिरालाले घरमै यस सामानको कदर गर्न सक्नुहुनेछ।
यी बिरालाहरूका लागि आधारभूत सहायक उपकरणहरू हुन् जुन तपाईंले घरपट्टि लैजानुपर्नेछ। पहिले यो राम्रो हुन्छ ती सबैलाई एउटै कोठामा राख्नुहोस्; एक शान्त कोठा जहाँ तिनीहरू बन्द गर्न सकिन्छ र उनीहरू सुरक्षित महसुस गर्छन् जब सम्म तिनीहरूले तपाईंमा विश्वास प्राप्त गर्दैनन्। एक पटक तपाईको विश्वास कमाई सकिए पछि तपाईले एक्सप्लोर गर्नका लागि दांवहरु खुला राख्न सक्नुहुन्छ अन्य घरका जनावरहरूलाई भेट्नुहोस्। र जब तपाइँ घरलाई चिन्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँका सबै चीजहरूलाई पुन: संगठित गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूको लागि निश्चित स्थान फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » Mascotas » घरमा बिरालो प्राप्त गर्न आधारभूत सामानहरू
'एल सिड' को सीजन २ अमेजन प्राइममा आइपुग्छ